Google Ramping Up Kunyora muWebmasters | Martech Zone
Chitatu, October 24, 2012 Chitatu, October 24, 2012 Douglas Karr
Isu tinoramba takatarisa kune edu vatengi 'webmasters maakaunzi. Haisi tsaona, mumaonero angu, kuti vatengi vedu vanoisa chinhanho sezvo isu tichikwanisa kwazvo kuziva uye kudzikamisa zvikanganiso zvinobuda muWebmasters. Google inoenderera mberi nekuvandudza maalgorithms ayo kupfuura kuyedzwa uye kwechokwadi mitambo iyo yakawanda SEO makambani yakaridzwa munguva yakapfuura. Hunyori huri kutamba chinzvimbo chiri kukura mune izvi.
Nekushandisa mitsara yemagariro pakukurumbira, Google iri kusimudzira yavo pagerank algorithm uye nekuvandudza zvakanyanya mhando yemhedzisiro kwete nekungoyera mukurumbira, asiwo mukurumbira munharaunda uye kukosha. Uye ivo vari kuzvitora zvakanyanya.
Nhasi, takagamuchira ichi chinyorwa chinonakidza muWebmasters. Ino inguva yekutanga kuti tione izvi… maWebmasters vachinyatsokumbira kuti chivakwa batanidzo peji ravo reGoogle + kuakaunti yavo yeGoogle +:
Idzi inhau dzakanaka uye isu takakurumidza kusundira mutengi wedu kubvumidza iyi link! Iko kune kudzidza kwakawanda chinongedzo mumharidzo inonongedzera kune izvi Google Mukati Rekutsvaga peji ine inotevera blurb:
Izvozvi zvave nyore kupfuura nakare kose kuti vanhu vabatane newe kana bhizinesi rako-chaipo paGoogle. Vanhu vanogona kuwana akakurumbira uye anobata maGoogle + profiles uye mapeji kuruoko rwerudyi rwemhedzisiro pazvinenge zvakakodzera pakutsvaga kwavo. Zvekutsvaga chaiko, senge zita rebhendi rakakurumbira, tinogona kuratidza peji reGoogle +.
Zvinotaridza kuti mhedzisiro yekubatanidza izvo zviviri ibara repadivi rinonakidza iro rinogadzirwa pane yekutsvaga injini mhedzisiro peji kana mhando yako ichitsvagwa:
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Muongorori wedu weSEO akawana rimwe gem… ruzivo pa kugadzira kubatana kubva kuGoogle + kuenda kuWebmasters kuburikidza neGoogle +. Izvi zviri kunakidza!
Tags: kunyoragoogle Plus- + -zvawanikwaWebmasterwebmasters zvishandiso
Kukura kwekutonga kweMafoni Ekutsvaga
Gumiguru 24, 2012 na5: 57 PM
Saka chinhu chikuru hachisi chekubatanidza kuvaka chitsva uye chakakosha kuti utarise pasocial media pachinzvimbo chekusimudzira zvinongedzo zvinogona kukonzera mhedzisiro yakaipa panzvimbo pekuti iwe ukwire kumusoro.